पुष २३ गते बिहिबार , हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! – NepalajaMedia
पुष २३ गते बिहिबार , हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
January 7, 2021 87
मेष –चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries)
सामाजिक र सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रसिद्धि मिल्नेछ। परिवार एवम दाम्पत्यजीवनमा सुख सन्तोषको अनुभव गर्नुहुनेछ। मोज-मस्ती र मनोरंजनले भागीदारीमा लाभ हुनेछ। जीवनसाथीसँग मेलमिलाप रहनेछ।
वृष -इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus)
बोलि र व्यवहारमा ध्यान राख्नुहोला। कुनै पनि मजाक गर्दा खराब परिस्थितिको निर्माण हुनेछ। गलत धारणा पैदा हुनेछ। मोज-शोक तथा मनोरंजनमा खर्च हुनेछ। स्वास्थ प्रति ध्यान राख्नुहोला। दुर्घटनाबाट बच्नुहोला।
मिथुन-का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को,ह (Gemini)
तपाईलाई लाभ मात्र हुनेछ। पारिवारिक सुख- शान्ति बनिरहनेछ। श्रीमतीमा खर्च हुनेछ। अविवाहित व्यक्तिको विवाहको सम्भावना रहेको छ। व्यपार एवम पेसामा आय बढ्नेछ। घरमा शुभ- प्रसंगको आयोजन हुनेछ। उत्तम भोजन र उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्ति हुनेछ ।
कर्कट –हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे,डो (Cancer)
शारीरिक मानसिक स्वस्थताको अभाव रहनेछ। छातीमा पीडा वा अन्य कुनै प्रकारको अनुभव हुनेछ। परिवारमा सदस्यसँग उग्र वाद-विवाद हुनेछ। शहरमा मानहानि नहोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला। स्त्री वर्ग तथा पानीबाट समस्या खडा हुनेछ। खर्च हुनेछ। समयमा भोजन मिल्नेछैन।
तन-मनले स्वस्थ र प्रफुलित रहनुहुनेछ। आफन्त र भाई-बन्धुसँग सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहनेछ। निर्धारित कार्य पूरा हुनेछ। भाग्यवृद्धिको अवसर आउनेछ। प्रतिस्पर्धिले विजय प्राप्त गर्नेछ। प्रिय व्यक्तिको निकटताले तपाईलाई हर्षित गर्नेछ। प्रेमपूर्ण सम्बन्धको गहनताको परिचय हुनेछ। आर्थिक लाभ हुनेछ ।
द्विधापूर्ण मानसिक वृत्ति रहनेछ । नकारात्मक विचारले मनको अस्वस्थता बढाउनेछ। पारिवारिक सदस्यसँग मनमुटाव हुन सक्ला। अनावश्यक खर्च हुनेछ । विधार्थीको पढाईमा ध्यान जानेछैन। बौद्धिक चर्चाको क्रममा विवादबाट बच्नुहोला।
वर्तमान समयमा तपाईको राम्रोसँग आर्थिक आयोजन पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको कलात्मक र सृजनात्मक शक्ति श्रेष्ठतम रहनेछ। शारीरिक र मानसिक रूपबाट तंदुरुस्त रहनुहुनेछ। दृढ़ विचार र आत्मविश्वासले पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। मोज -शोक र मनोरंजनमा खर्च हुनेछ। दाम्पत्यजीवनमा निकटता अनुभव हुनेछ।
वृश्चिक-तो, ना, नि, नु, ने, नो,या,यि,यु (Scorpio)
विदेशमा बस्ने स्नेहीजन वा मित्रको तर्फबाट शुभ समाचार मिल्नेछ। दम्पत्यजीवनमा जीवनसाथीकोसँग निकट पल व्यतीत गर्नुहुनेछ। कोर्टको मामलामा सम्हालेर कार्य गर्नुहोला।
धनु-ये, यो, भ, भि,भु, ध,फा,ढ,भे (Sagittarius)
प्रेमको सुखद अनुभव प्राप्त गर्ने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ। आर्थिक, सामाजिक र कुटुम्बिक दृष्टिले लाभ हुनेछ। गृहस्थ जीवनमा आनन्द छाउनेछ। मित्र , विशेष रूपले स्त्री मित्रबाट लाभ हुनेछ। आयको साधना वृद्धि हुनेछ। व्यपारमा वृद्दि र लाभ हुनेछ। वैवाहिक योग रहेको छ। मांगलिक कार्य हुनेछ। उत्तम भोजन मिल्नेछ।
मकर –भो,ज,जि,खि,खु,खे,खो,गा,गि (Capricorn)
कुम्भ –गु, गे, गो, सा, सि, सु,से,सो,द (Aquarius)
अस्वस्थ महसूस गर्नुहुनेछ। मानसिक रूपले स्वस्थ रहनुहुनेछ। आफिसमा उच्च पदाधिकारीबाट बच्नुहोला। मोज -शोकमा विशेष खर्च हुनेछ। यात्राको योग रहेको छ। विदेशगमनको सम्भावना पैदा हुनेछ तथा विदेशबाट समाचार मिल्नेछ।
आकस्मिक धन लाभको योग रहेको छ। शारीरिक र मानसिक रूपबाट अधिक परिश्रम गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यको मामलामा ध्यान राख्नुहोला। खर्च अधिक रहनेछ । अनैतिक कामवृत्तिले समस्या पैदा गर्नेछ , आध्यात्मिक विचार र व्यवहारले कुमार्गमा जानबाट रोक्नेछ।
Prevवैशाख चुनाव नभए संकटलकाल !
Nextमेस्सीको दुई गोल, बार्सिलोना शीर्ष तीनमा